November 2021 - Channel Lover
ဇန်န၀ါရီ(၁)ရက်နေ့မှာ လွတ်မြောက်လာတော့မယ့် ပြည်သူ့အချစ်တော် အနုပညာရှင်များ
November 30, 2021 by Channel Lover
ဇန်န၀ါရီ(၁)ရက်နေ့မှာ လွတ်မြောက်လာတော့မယ့် ပြည်သူ့အချစ်တော် အနုပညာရှင်များ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ခါ ကြားသိရတဲ့ သတင်းကတော့ အလွန် အင်မတန် ဝမ်းသာစရာ ကောင်းတဲ့ သတင်းလေးပါပဲဗျာ ဘာဖြစ်လို့တုန်း ဆိုတော့ ဇန်န၀ါရီ (၁) ရက်နေ့မှာ ပြည်သူ့အချစ်တော်တွေဖြစ်တဲ့ . . . အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ ပိုပို ၊ ပြေတီဦး ၊ လူမင်း ၊ ပိုင်တံခွန် နှင့် ဝင်းမင်းသန်း တို့ဟာဆိုရင်ဖြင့် လွတ်မြောက်လာမယ်လို့ ကနဦး သတင်း သိရှိရပါတယ်…။ ဒီသတင်း အမှန်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ…။ သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်ကတော့ မပါဝင်သေးဖူးလို့လဲ သိရပါတယ်…။ မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံး အေးချမ်းနိုင်ပါစေ အမေစုလဲ အမြန်ဆုံး အချုပ်အနှောင်မှ လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ unicode ဇနျနဝါရီ(၁)ရကျနမှေ့ာ လှတျမွောကျလာတော့မယျ့ … Read more
မနက်ဖန် ချဲဖွင့်မှာမို့ အချိန်မီလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…
မနက်ဖန် ချဲဖွင့်မှာမို့ အချိန်မီလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်… အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ချဲပေါက်ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်းတစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပြီး အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ဖြစ်ပါတယ် ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပါယ်အတိုချုပ်က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်က ကောဏ္ဍဝေန မထေရ်ကြီးသည် ပထမစာရေးတံမဲကို အမြဲတမ်း ပေါက်ခဲ့၏ ထို့အတူ ကျွန်ုပ်သည်လည်းဤသို့ ဖြစ်ရပါစေသတည်း ဟု ဆိုထားပါတယ်။ ရှေးဟောင်းပေစာ တစ်ခုထဲမှာလည်း ဒီဂါထာရဲ့ အစွမ်းကို အထူးအစွမ်းထက်မြက်ကြောင်း ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ် အခုဂါထာကို ဆဋ္ဌမအာရုံ ပရိသတ်တွေအတွက် စေတနာရှေ့ထားလို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် ဂါထာကို မဖော်ပြမီမှာ အရင်ဆုံး ထီပေါက် ချဲပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာရဲ့သီလကို ဆောက်တည်ရပါလိမ့်မယ်။ ဂါထာမန္တန်တွေရဲ့ အစွမ်းဆိုတာ ရွတ်ဖတ်နိုင်မှုအစွမ်း၊ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား စိတ်စွမ်းအားတို့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အစွမ်းထက်မြက်မှုက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူဘဲ ပိုနိုင်၊ … Read more
၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်း(၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။ မိတ်ဆွေတို့၏ကောင်းကျိုးများကို အစဉ်လိုလားသော မင်းသိမ်းခိုင် – ရွှေရမ်းထူးလင်း ၂၀၂၂ ခုနှစ် မင်္ဂလာနှစ်သစ်ကိုကြိုလင့်သော ငွေနှင်းမှုန်များကြားမှ ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်ရာကောင်းလှသေည့် ဆောင်းတွင်းကာလ ဒီဇင်ဘာလနေ့ရက်များ ဆရာ မင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း ) ၏ နေ့စဉ်ဗေဒင်ဟောစာတမ်းများကို နားဆင်လိုပါက တယ်လီနောဖုန်းနံပါတ် (၃၀၄၃) ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပါ ( တစ်ပတ်လျှက် ၃၁၅ ကျပ် ၊ ဉာဏ်ပူဇော်ခပါပြီး ) … Read more
တရားက်စရာကောင်းတဲ့ လူတစ္ခ်ို့ရဲ့ စိတ္ဓါတ်တြေကို ရင္ဖြင့်လာတဲ့ ခေ်ာရတနာ
ပရိသတ်ကြီးရေ ချောရတနာကတော့ ကာရာအိုကေ ခေတ်ထဲက တေးစီးရီးတွေမှာ သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေ သတိထားမိလာပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ မင်းသမီတစ်လက်လို့လည်း ဆိုရမှာပါ။ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ချောမောလှပတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး တစ်သားမွေးတစ်ေ သွးလှတယ်လို့ ဆိုရလောက်အောင်နုပျိုလှပနေတဲ့သူပါ။ ဇာတ်ဆောင်ကာရိုက်တာတွေမှာသာမက ဇာတ်ပို့နေရာတွေမှာလည်း ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်တတတ်တဲ့သူမကတော့ ” ဥ ” ဇာတ်ကားမှာ စိတ်မနှံ့တဲ့ ဇာတ်ပို့နေရာကနေ အကယ်ဒမီဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း သူမအနေနဲ့ Live saleလေးတွေ ပြုလုပ်လျက်ရှိနေတာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့” တချို့ လူတွေ သူများအပြစ်ပဲထိုင်ပြော ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် တချို့ ကိုယ်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေလုပ်ဖို့အမြဲကြိုးစားနေကြတယ် ” ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့သူမ​ကြုံတွေ့ရတဲ့ လူတွေရဲ့သဘောကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတာ ပါ။ ပရိသတ်တွေလည်း ချောရတနာပြောတာကိုထောက်ခံရင်မှတ်ချက်တစ်ခုခုပေးခဲ့ပါဦးနော်။ Source- ChawYadanar Credit -CeleGabar … Read more
စည်သူဝင်းရဲ့စာတွေကို သက်သေအဖြစ် တစ်ခုချင်းစီ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မြတ်နိုးအိမ်
ပရိသတ်ကြီးရေ စည်သူဝင်းနဲ့ ခြောက်နှစ်ကျော် လက်တွဲခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးကတော့ လူမှုကွန်ယက်မှာ ဖောက်ပြန်ထားတဲ့ အချက်အလက် တွေကို တင်ပြီး နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ အကောင့် အဟက်ခံ ခဲ့ရပါတယ်။ သူမဆီကို ပြန်လာပါရစေ ဆိုပြီး ငိုယို တောင်းပန်ထားတဲ့ စည်သူဝင်းရဲ့စာတွေကို သက်သေအဖြစ် တစ်ခုချင်းစီ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မြတ်နိုးအိမ် တစ်ချို့ပရိသတ်တွေ ကလည်း သူမကို အပြစ်တင် ဝေဖန်နေ တာကြောင့် အတော်လေးကို ပင်ပန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က မြတ်နိုးအိမ်ရဲ့ Instagram အကောင့်တွင် အခုလိုရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ” မနက်ဖြန်ဆို ခြောက်နှစ်ပြည့်မှာ ပြောတော့ အရမ်းချစ်တယ်ဆို အရင်အမှားတွေအတွက် ပြင်ပြီး နောင်တရ တယ်ဆို လက်ထပ်ကြတော့မယ်ဆို နောက်တစ်ယောက်ရှိနေတာတောင် အရမ်းချစ်ပြခဲ့ အရမ်းဂရုစိုက် ပြခဲ့တာတွေကဟန်ဆောင် ခဲ့တာတွေပဲလား။ အားလုံး … Read more
ထိမိ ပီပွငျတဲ့ သရု ပျဆောငျခြ ကျမြား နှငျ့ အပွုံးခြို ခြိုေ တှကွောငျ့ ပရိတျသတျ ရငျထဲနရော ယူထားတဲ့ အနုပ ညာရှငျတ ဈဦးဖွဈပါ တယျ။ သူဟာ မွနျမာစာ လုံးပေါငျးနှ ငျ့ပတျသကျ ၍ ပညာပေး ရိုကျကူး ထားတဲ့ မွနျမာ စာ မွနျမာစ ကား ရုပျသံအစီအစဉျ မှာ သရုပျဆော ငျတ ဈဦးအနနေဲ့ အနုပညာ လုပျငနျး မြားကို စတငျလှုပျရှားခဲ့ သူဖွဈပါ တယျ။ သူဟာ လကျရှိမွနျမာ့အေ ရးတှငျ ပွညျသူနှငျ့ တသားတ ညျး အမှနျတရားဘ ကျမှ ပါဝငျတျောလှနျခဲ့တဲ့ နိုငျငံရေးလှုပျ ရှားမှုအ ခြို့ကွောငျ့ စဈကောငျစီ မှ ဖမျးဆီး ထိနျးသိမျးထား … Read more
PDF တွေကို ခပျပေါပေါ ဦးနှောကျပိုငျရှငျတှမှေနျး သိသာပါတယျ..လို့ပြောလာတဲ့ အကယ်ဒမီ ရဲအောင်
“အပွဈမရှိတဲ့ အနုပညာရှငျတှကေို ရနျရှာတာ မငျးမဲ့စရိုကျဆနျလှနျးတယျ”လို့ ဆိုလာတဲ့ ရဲအောငျ မငျးသားကွီးရဲအောငျလို့ ဆိုလိုကျရငျ ရာစုနှဈပေါငျး မြားစှာ ရုပျရှငျဗီဒီယိုလောကမှာ အောငျမွငျကြျောကွား လာခဲ့တဲ့ မငျးသားကွီးမှနျး အားလုံး အသိပါပဲနျော။ ရဲအောငျဟာဆိုရငျ ငယျရှယျစဉျကနေ စပွီး ဇာတျကားပေါငျး မြားစှာ ရိုကျကူးခဲ့ပွီး ယခုအခြိနျထိ အောငျမွငျမှုတှေ ပိုငျဆိုငျထား နဆေဲသူ တဈဦးဖွဈပွီး ပရိသတျတှေ နှဈသကျနဆေဲသူ ဖွဈပါ တယျနျော သို့ပမေယျ့လညျး အာဏာသိမျးမှုကွောငျ့ ပွညျသူတှေ ဒုက်ခရောကျနတေဲ့ ယခုကာလမှတော့ ရဲအောငျ ဟာ အာဏာသိမျးစဈကောငျစီ စီစဉျတဲ့ပှဲတှမှော ပါဝငျဖြျောဖွကော ပွညျသူ့ဖကျက ရပျတညျမှု မရှိခဲ့တဲ့အတှကျ ဝဖေနျမှုတှနေဲ့ ကွုံခဲ့ ရပါတယျနျော။ ယခုလတျတလော မှာလညျး စဈကောငျစီ စီစဉျတဲ့ MRTV ဂီတပှဲမှာ ပြျောပြျောကွီး ပါဝငျခဲ့တဲ့ … Read more
ကိုစည်သူဝင်းနဲ့ပြောတဲ့ ယွန်း Acc က Hack ခံရတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြလာခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်း
ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေအားလုံး အကြောင်း ယွန်း ရှင်းပြပါရစေ . . . ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ .. ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံး အကြောင်း ယွန်း ရှင်းပြပါရစေ . . . ကိုစည်သူဝင်းနဲ့ပြောတဲ့ ယွန်း Acc က Hack ခံရတာနှစ်နှစ်ရှိပါပီ . Hack တဲ့သူက ယွန်းကို ကလေးသရုပ်ဆောင်ဘဝထဲက အားပေးခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးလို့ာသိရပီး သူ့မျက်နှာကို ယွန်း မမြင်ဖူးပါဘူး . . …… ပရိသတ်ကြီးကို Hack ခံရတာ မပြောဖူးဆိုတာကယွန်းလို ခေတ်ပညာတတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ Hackခံရတာ မလုပ်တတ်ဖူးလားလို့ အထင်သေးခံရမှာစိုးလို့ပါ . ကိုစည်သူဝင်းနဲ့စကားလာပြောတာက Hack မလေးပါပဲ . သူက ယွန်း အသံနဲ့ဆင်ပါတယ် . ဖုန်းပြောခဲ့ဖူးတာမလို့ပါ … Read more
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ဖကျဆဈ စဈ တရားရုံးက ပုဒျမ ၅၀၅ ဖွငျ့ အကွမျးဖကျစဈကောငျစီက အမှုဆငျ တရားစှဲဆိုထားမှု အမိနျ့ခရြကျကို ဒီဇငျဘာလ ၆ ရကျနသေို့ ပွောငျးရှေ့ လိုကျကွောငျး တရားရုံးသတငျးရပျကှကျမှ ပွောသညျ။ ယငျးနောကျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို သဘာဝ ဘေးအန်တရာယျဆိုငျရာ ပုဒျမဖွငျ့ စှဲဆိုထားသော အမှုအတှကျ သကျ သေ မန်တလေးတိုငျးဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာဇျောမွငျ့မောငျကို ကနျြးမာရေး ကောငျး မှနျလာပွီဖွဈ၍ ဆငျ့ချေါရနျ ရှနေ့မြေားက တငျပွရာ စဈကောငျစီခနျ့ထားသော တရားသူကွီး ဒီဇငျဘာ ၆ ရကျနတှေ့ငျ ဆုံးဖွတျမညျဟု ပွောဆိုကွောငျး သိရှိရသညျ။ အကွမျးဖကျစဈကောငျစီသညျ နိုငျငံတျောသမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့၊ နိုငျငံတျော ၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအပါအဝငျ အရပျသားခေါငျး ဆောငျမြားကို … Read more